“SIAO” any Ougadougou: homen-danja ny asa tanana Malagasy | NewsMada
“SIAO” any Ougadougou: homen-danja ny asa tanana Malagasy
Manana ny lanjany manokana ny asa tanana malagasy eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Nasaina manokana i Madagasikara mandritra ny SIAO hatao any Ouagadougou, ny 26 oktobra hatramin’ny 4 novambra ho av y izao.
Nampahafantarina, ny faran’ny herinandro lasa teo teny Ivato, ny fandraisan’anjaran’i Madagasikara amin’ny “Tsena iraisam-pirenena momba ny asa tanana”, any Ouagadougou, Burkina Faso, na ny “SIAO” (Salon international de l’artisanat d’Ouagadougou). Andiany faha-15 ny fampisehoana hanomboka ny 26 oktobra hatramin’ny 4 novambra 2018. Homezan-danja manokana an’i Madagasikara ny asa tanana avy eto an-toerana, mandritra io tsena lehibe io, satria nasaina manokana isika, noho ny antony maro.
Nandray anjara ihany i Madagasikara hatramin’izay ka ny fahitan’i Burkina Faso ny hatsaran’ny vita malagasy tamin’ireo tsena momba ny asa tanana teo aloha no nampiakatra ny lanjany toy izao. Betsaka ny tombontsoa ho azon’i Madagasikara, toy ny fanamorana ny fahafahana handray anjara amin’ny lafiny rehetra ka hisy mihitsy andro iray hatokana ho antsika Malagasy hahafahana mamelabelatra ny kolontsaina sy hampisehoana manokana ny asa tanana vokatry ny talenta.
Hoentina haseho mandritra ny “SIAO” ny hoditra, ny sikotra, ny vato, ny rary sy ny maro hafa. Hanana solontena ampolony ny Malagasy mpanao asa tanana hiatrika ny hetsika any an-toerana hotarihin’ny minisitra Johasy Eleonore. Handray anjara amin’io fotoana koa ireo firenena afrikanina maro, amerikanina, aziatika, eoropeanina ary aostralianina.